Izixazululo Zebhizinisi – SurveyFiesta
Ukukhula kogqozi ngenxa yocwaningo oluphusha ukuphumelelisa izidingo zamakillayente akho.
Izixazululo (solutions) zocwaningo lwezimakethe zethu noma yimiklamo yeChi-Ching " Chi-Cing surveys" , njengoba sibuye siyibize kanjalo, yiyo ephethe imiklamo ekhokhelwayo. Sisiza abacwaningi nezinkampani ukuthi zithole labo abafanelekile ukuba babe yingxenye yocwaningo. Abazimbandakanyayo nalolu cwaningo bathola amaphuzu angashintshwa abe yimiklomelo noma yimali. Siyaqinisekisa ukugcina umqulu wolwazi ovuleleke kunoma ubani okulungele ukuba yingxenye yocwaningo bese eyakhokhelwa. Uhlobo lwemiklamo ye Cha Ching ekhokhelwayo ihlanganisa nezinto ezinjengokubuyekeza loko okuphethwe yizindlela zokuxhumana ezahlukene (multimedia content) ,njengokubuka i "video clip, noma ngokulalela i "audio file"nokubuyekeza izithombe (review images) njalo njalo, bese-ke ucela lowo ongenele lomklamo ukuthi akawuqedele bese esho-ke akufundile kuloko abekubuyekeza. Inkundla yethu ihlola nobuchule obusetshenzisiwe lapho umuntu esebika ngaloko akufundile ukuthi ngabe ukucabangisisile yini na. Uma-ke sekuqediwe , inkundla yoMklamo weZinkampani Ezehlukene ibe seyengamela imivuzo yalabo ebebe yingxenye lapha bese inikeza umbiko kwikilayenti.Abasizi bethu abanikeza izaluleko bahlala bekhona ukusiza ngaloku; "scoping, design, administration "nokunika umbiko nge "kit" Yocwaningo lweZimakethe.
Cela " iDemo " Ukubakhombisa
Isystem ye esetshenziswayo ukuze kutholakale umkhonyovu (
Isystem ye esetshenziswayo ukuze kutholakale umkhonyovu (Fraud Thermometer): Yagqugquzelwa ukuthola ulwazi lwawo -17th Century ngokuvula lapho kugcinwa khona imiqulu yalabo abadumile njengo Tosho-gu eJaphane. Imiklamo yethu yeShizaru (Shirazu Surveys) yakhelwe phezu kwesisho sethu esithi "awuhambisani nhlobo nemikhonyovu / ukungcola. Awulaleli lutho, awuzwa lutho, futhi awukhulumi lutho oluhlangene nemikhonyovu" . Loku ukwenza ngokugqugquzela labo abangabaqashwa kanye nalabo ababambe iqhaza enkampanini , ukuthi bangathuli nje bebona kwenziwa imikhonyovu nohlukumezo kwinkampani. Abasizi bethu abanika izeluleko bayalekelela mayelana ne " scoping, design, administration" nokubika nge Shizaru Survey Kit. Lena yinhloso yemiklamo eyenziwayo ukubhekelela ukuthi izinhlaka zokuvikela imikhonyovu ziyasebenza yini. Umphumela walenqubo (process) usuzoveza ulwazi noma ucwaningo ngebhizinisi lapho lingenzi kahle khona, njengokuthi nje lizoveza lapho ibhizinisi noma inkampani ibuthaka khona, bese iveza loko okungenziwa ukuvikela ibhizinisi kulabo abafuna ukwenza imikhonyovu.
Sesiqambe I" Customer Satisfaction and Experience (CSE) kit " siyisusela kwizinkundla zeMiklamo Yezinkampani ezehlukene ( SurveyFiesta platforms) ,ukusiza izinhlangano ukuba zikwazi ukunika amakhasimende azo ukweneliseka okuphelele kanye nesipiliyoni. Amathimu ethu ayaqonda ukuthi ukweneliseka nesipiliyoni kwamakhasimende akuyona into eyodwa ,ngakho-ke adizayine (design) uhlelo kanye nemibuzo engaqondene nje nokubheka injabulo noma ukweneliseka kwamakhasimende kuphela, kodwa ebhekelela ukuthi ngabe ikhasimende lizizwa lenelisekile yini ngokuthi izidingo zalo noma inkinga yalo ixazululiwe yini. A basizi bethu abanikeza ulwazi nezaluleko (consultants) bayasiza lapho nge "scoping, design, administration" kanye nokunikeza umbiko (reporting) nge CSE kit. .
(Employee Loyalty and Insight) (ELI ) : Ikit yethu emayelana noKwethembeka koMqashwa nendlela yokubona izinto zingakenzeki (ELI) yenzelwa phezu kocwaningo lwenkampani nesipiliyoni, esikhuluma kabanzi ngobudlelwane obuphakathi kokuthembeka komqashwa nokwenza kahle kwenkampani. Ikit yomklamo emayelana nendlela yokubona izinto zingakenzeki ukuthola ukuthi abaqashwa banilwazi olungakanani ngebhizinisi, kanye nezinkinga ababhekana nazo. Abasizi bethu bolwazi nezaluleko bona basiza nge "scoping, design, administration kanye nokunika umbiko nge ELI kit.
Njengoba kungekho lula njalo ukwenza ama intavyu ubuso nobuso alabo abashiya umsebenzi, ithimu yalabo abanikeza ulwazi nezaluleko sebeqhamuke nesu , elenza ukuthi inqubo ibe lula yalabo baqashwa abashiyayo emsebenzini noma abaphumayo ngokunjalo. Sinikeza usizo kwi "scoping, design, administration nokunika umbiko nge kit yomklamo wama intavyu okuphuma, ngenhloso yokuqoqa ulwazi hhayi nje lokusiza inkampani ukuba yenze kangcono kuphela ekuqikeleleni izizathu ezenza abaqashwa bashiye umsebenzi, kodwa kube ukuthi bashintsha nomqashwa ongaphathekile kahle azizwe eseziqhenya ngokuba yilungu lenkampani.
Ngenxa Yezinkundla zethu Zokuphatha ze "eLearning", izinhlangano zikuthola kulula ukushintsha ulwazi lokuqeqesha obelusetshenziswa, amapholisi, indlela yokwethula ulwazi (presentation) kanye nezinye izindlela zokuxhumana ezahlukahlukene ukuba zenze umgudu olandelwayo (course) we eLearning onamandla. I"website" eyenganyelwe ewumhlahlandlela walapho kuzoqalwa khona, (portal management) inikeza ithuba kwi HR, kulabo abazoqeqesha kanye nabaphathi, ukuba bakwazi ukulandela umkhondo wenqubekela phambili nokwenza okufanele komqashwa. Isaphothi yenqubo mgomo wethu (Course Builder) isebenziseka kalula ibuye futhi ifake lezo zinto ezivumela ukuhleleka kwenqubo- mgudu phezu kwezinhlobo zamafoni asetshenziswayo.